ပုံဆွဲစကေး 1: 0.5 1234568 10
ကွက်ရဲ့ width X
လိပ်ရဲ့ width B
စတော့ရှယ်ယာ C, %
အလုပ် 1 လိပ်များအတွက်
Y - ထိုလုပ်ကြံမှု၏အရှည်
X - ကွက်ရဲ့ width
A - လိပ်အရှည်
B - လိပ်ရဲ့ width
C - အရံတစ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆို
V - တစ်လိပ်ရဲ့အလေးချိန်ကီလိုဂရမ်အတွက်ဖြစ်ပါသည်
ထိုပုံဆွဲထဲမှာ display ကိုအဘို့အဦးတည်ချက်ကို styling ကိုရွေးချယ်ပါ။
ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ရန်သင့်အားအလိပ်နှုန်းနဲ့စျေးနှုန်းနှင့်၎င်း၏ installation ကိုအပေါ်အလုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့လှပတဲ့ချောချောမွေ့မွေ့မြက်ခင်းအကူအညီခေတ်သစ်နှင့်အဆင်ပြေကိုလှိမ့ခငျးအပေါ်တစ်ဦးအပိုင်းကိုဖန်တီးပါ။ မြက်ထဲတွင်ထားရှိအစေ့နှင့်အတူ Turf ၏လိပ်၌ရောင်းသောဤ herbaceous အဖုံး။
ပုံမှန်အားဖြင့်, ကုမ္ပဏီတွေအကူအညီနှင့်၎င်းတို့၏ပုံစံအတွက်ပူဇော်သက္ကာဘို့, ကိုလှိမ့ခငျးရောင်းချနေ။ သို့သော်အချို့သောအသိပညာရှိခြင်း, သငျသညျအလုပျကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပျဆောငျနိုငျပါသညျ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကသင်၏တစ်ခုလုံးကို site ကိုချောမွေ့စိမျးလနျးအဖုံးဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်မည်မျှမြက်ခင်း၏လိပ်တွက်ချက်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်ဤအဘို့ကိုသိရန်လိုအပ်သမျှအကြံစည်မှု၏အရွယ်အစားနှင့် Turf မြက်တစ်လိပ်, သင်လိုအပ်တော့ရှယ်ယာများ၏ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်အလက်နှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူသင်လိုအပ်မယ်လို့လိပ်, သူတို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေကုန်ကျစရိတ်၏အရေအတွက်ကိုတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ထိုနောက်မှသင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးဥယျာဉ်တော်၌ဒါမှမဟုတ်ရှေ့မြက်ခင်းပေါ်တွင်သင်၏မြက်ခင်းဝယ် တင်. ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့လက်နှင့်အတူ Landscaping - ကလွယ်ကူပါသည်။
စတော့ရှယ်ယာများ၏ရာခိုင်နှုန်းပန်းပွင့်ကုတင်, ပန်းပွင့်ကုတင်နှင့်ဥယျာဉ်လမ်းခရီးနှင့်အတူသမားရိုးကျကြံစည်မှုနှင့်ဧရိယာများအတွက် 10 ရာခိုင်နှုန်း5ရကြလိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။
မြက်ခင်း၏ installation မှဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်, သငျသညျထို site ကိုပွငျဆငျရမညျ။ ကလူအပေါင်းတို့သည်အပျက်အစီးများကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်ပါသည်ကတည်းကကျောက်, ပေါင်းပင်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ မြေဆီလွှာအထူးဓာတုပစ္စည်းကိုင်တွယ်နှင့် align ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်။ ထို့နောကျရေနုတ်မြောင်းစီစဉ်ခဲ့သည်။ မြက်ခင်းအောက်၌ပလက်ဖောင်းများကြိုတင်ပြင်ဆင်အဆင့်ရဲ့အဆုံးမှာမြေသြဇာမြေဆီလွှာ, နှင့်မျှော်လင့်ထားဓာတ်မြေသြဇာတင်သောမီကတစ်ပါတ်နှင့်ပြည့်စုံသည်။ မြေပြင်လည်းသွေ့ခြောက်လျှင်မြက်ခင်းကိုတင်သောမီ, ကစိုစွတ်ကြ၏ရပါမည်။
အခုတော့မြက်ခင်းထားကြ၏နိုင်ပါသည်။ ဤသည်မြက်ခင်းကိုပယ်ဖြတ်သောအခါယခုအချိန်တွင်မှနောက်မ 72 နာရီထက်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေမပါလျှင်သို့မဟုတ်, သင်တို့ကိုတပ်ဆင်သည်အထိရံဖန်ရံခါတစ်ရိပ်ရတဲ့အစက်အပြောက်နှင့်ရေထဲတွင်ပြုတ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့သင့်သည်။
အသီးအသီးအခြားကျော်ကို4အလွှာအပေါ်လိပ်ခေါက်မထားပါနဲ့။ တောင်မှကောင်းသောခငျးလည်းကြီးမားသောဝန် contraindicated ။
ဒါကြောင့်တဦးတည်းအချိန်မှာမြက်ခင်းကို တင်. မှနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, သတိရပါ။ ဒါကချောမွေ့ယူနီဖောင်းအပေါ်ယံပိုင်းဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
Turf တင်သောများအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ဆောင်းဦးရာသီသို့မဟုတ်နွေဦးရဲ့အစစဉ်းစားသည်။ သို့သော်ထိုသို့တပြည်လုံးကိုအေးစက်နေတဲ့သို့မဟုတ်လည်းစိုစွတ်သော၏ဤအချိန်တွင်မဖြစ်သင့်ကြောင်းမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။
ပြုတ်တင်သောကြောင့်စတိုးဆိုင်ဖို့ခက်ခဲပြီးရာအရပ်မှပိုမိုနီးကပ်စွာစတင်ခဲ့သည်။ မြက်ခင်းချပြီးတစ်ဖြောင့်အညီဖြစ်သင့်သည်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် Non-စံအသွင်သဏ္ဌာန်၏ဆိုဒ်များကိုဖုံးလွှမ်း, ခက်ခဲသောအရပ်တို့ကိုမစတော့ရှယ်ယာထဲကနေ Turf ၏အထူးဖြတ်အပိုင်းပိုင်းပိတ်ထားကြသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုအတန်းအဖုံး, အပြည့်အဝပန်းကန်နှင့်အတူ၎င်း၏တဝက်ထက်မနည်း၏အရွယ်အစားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းစတင်ဖို့နဲ့အဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသေးငယ်တဲ့အလယ်အတန်းထဲတွင်နေရာကိုအပိုင်းပိုင်းရှိသော်လည်းဒေသတွင်း၌။
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းတစ်ခုချင်းစီစီးရီးမြက်ခင်းပြီးပါက။ အ Turf ရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့်အောက်မျက်နှာပြင်မှထွက်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်လိုအပ်သောတောင်ပို့သို့မဟုတ်စိတ်ကျ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။ တဖန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမြက်ခင်း။
တန်းစီ bricklaying တူအချင်းချင်းဆွေမျိုးထေတင်လိုက်တယ်။ ထိုသို့ Turf ပြားတင်းတင်းကျပ်ကျပ်အချင်းချင်းရန်ဖိအားပေးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့မထပ်ဘူးသေချာရန်အရေးကြီးပါသည်။
အသစ်-ထားကြ၏ Turf အပေါ် Walk အကြံပြုသည်မဟုတ်။
ပြီးနောက် Turf, အချုပ်ရိုးကိုအထူးအရောအနှောအတွက်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သော space ကိုတင်သောပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအရောအနှောများဖွဲ့စည်းမှုသင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ရှိမြေဆီလွှာ၏အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါတယ်။
Ulozheniju မြက်ခင်းကောင်းစွာရေနှင့်ချပစ်သင့်သည်။ အသီးအသီးတစ်စတုရန်းမီတာတွင်အဘယ်သူမျှမထက်နည်း 15 လီတာယူပါလိမ့်မယ်။ တစျနေ့မြက်ခင်းရေလောင်းလည်းလိုအပ်ပါသည်တခါအောက်ပါရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာတော့။
မြက်ပင်သည်အမြစ်များအကြောင်းတစ်လပြုတ်ထားကြ၏ခဲ့သည့်အပေါ် အခြေခံ. နှင့်အတူပေါက်ကြလိမ့်မည်နောကျ, Landscaping နဲ့မြက်ခင်းပြင်တာရှည်ခံရလိမ့်မည်။
မြက်ပင်ကိုတင်သောပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲဖြတ်ခံရနိုင်ပါတယ်ပြီးနောက်။ ဤသည်က၎င်း၏ပုံစံ၏ညှနျကွားဖြတ်ပြီးပြုသောအမှုများနှင့်မြက်ပင်သည်၏ဓါးသွားကိုသာထိပ်နှင့်အတူအဖြတ်ခံရသင့်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အချိန်မြက်ခင်းများသောအားဖြင့်စက်တင်ဘာလ၌မိမိတို့ဆံပင်ဖြတ်သည်။
နွေဦးရာသီ၌, မြေပြီးနောက်, thawed မျိုးအောင်နှင့်ကိုထပ်မြက်ခင်း mowed, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်, မြက်ပင်များ၏ဓါးသွားကိုသာအကြံပေးချက်များဖြတ်။
ပူနွေးလအတွင်း, မြက်ခင်းတိုင်း 10 ရက်အကြောင်းရေလောင်းရပါမည်။